Paris na mpaghara ya na-eme emume March - Marchwa Maachị
Home » Noticias » Pịa Ihe edeturu » Paris na mpaghara ya na-eme emume Machị
04 / 03 / 2020 04 / 03 / 2020 site Antonio Gancedo
PARIS na usoro iwu ya mere ka ụbọchị ụwa jisie ike maka udo na enweghị nzụ.
Nyocha mbụ na France nke akwụkwọ “Mmalite nke njedebe nke ngwá agha nuklia ”
Febụwarị 16, na usoro nke ụbọchị nke abụọ nke ọnwa abụọ maka Udo na Ọgba aghara, mere na mpaghara nke iri na abụọ nke Paris the nyocha mbụ na France nke akwụkwọ Mmalite nke njedebe ngwá agha nuklia, ndi enyi Mundo sin Guerras y sin Violencia (onye otu ICAN) haziri 100 ECSE, otu oru ọdịbendị nke ịdị n'otu. Thebọchị echichara nzukọ nzukọ ICAN, na February 14 na 15 na Paris, akwụkwọ akụkọ sonyere Rafael de la Rubia nke ndị otu egwuregwu ụwa nke March na Carlos Umaña nke kọmitii na-ahụ maka njikwa mba ụwa. Ndi ICAN Ọ bụ ohere iji soro ndị na-ege ntị kwurịtanụ isiokwu metụtara ya.
Ofbọchị Omume maka Ọgba aghara na Montreuil na Bagnolet
Weekendbọchị izu ụka sochirinụ bụ na Montreuil na Bagnolet ebe Satọdee, Machị 22, dum Ofbọchị Omume Arụ Ọrụ, nke a haziri ahazi nke François Dauplay nke ìgwè egwu Egwu adighi. Site na awa 15 gaa n'ihu Tofoletti Social na Cultural Center Bagnolet, na-ahazi n'oge a ụbọchị asụsụ asụsụ n'okpuru akara nke arụghị ọrụ ike, ọha mejupụtara nke ndị okenye na ụmụaka, bụ nke ihe ngosi nke ụlọ akwụkwọ mmụta gbasara mmeghe nke ndị Nwoke (Movement for Alternativeitive Alternative), sitekwa ná mkpakọrịta Soleil Comorien y Omenala Solidaire. Ndi okenye na umuaka nwere ike itinye aka na ihe omume di iche iche: ulo ihe osise na okpu iji ya dee ede PEACE n'asusu di iche iche, egwuregwu guru n'asusu asusu ha, na ime ulo ozo, ileputa ihe bu ihe ngosi ede. Mmalite nke njedebe nke ngwa agha nuklia. Mgbe alassane gosipụtara ụbọchị ahụ, onye isi nke etiti ahụ gosipụtara ndị nnọchianya dị iche iche nke otu ndị ahụ metụtara, ụmụaka na ndị okenye tụgharịrị ụdị egwu dị iche iche dị ka Comoros na Berbers, tupu ha na-abụkọ abụ ọnụ niile mara mma nke Simon dere. “Coza Zi Gi” nke na-ejikọ ọtụtụ ụzọ kelee ọtụtụ asụsụ! Ha niile wee banye n'akụkụ ọzọ nke agbata obi ahụ na egwu nke ụsụ ụzụ na ndị ọzọ zigzagging n'etiti ụlọ ndị ahụ ruo mgbe ha sonyeere ndị otu ndị ọzọ agbata obi. Les amis de l'école de la Noue N’ebe ị na-eme mkpọtụ, n’ụzọ nke a na-esonye n’akụkụ abụọ nke agbata obi, n’etiti obodo abụọ. Mgbe ahụ, ntakịrị, obere otu pere mpepaara JP.Timbaud butere ụzọ hazie akara udo dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 120 ma jiri ike wepụta okwu “Montreuil na Bagnolet for Peace and Nonviolence! “Oge anwansi sochiri mgbe ahụ: ụmụaka ahụ ji ịnụ ọkụ n'obi were odide na ịdekọ nzu na ala na ọtụtụ ozi ederede, ọtụtụ ozi udo na enweghị ọgba aghara n'asụsụ niile. Vangbọ-agha ahụ hapụrụ ọzọ ịga maka nke Maison de quartier 100 Hoche na Montreuil ebe nri dị n'èzí na-eche ndị sonyere; n'ogige a na-emekọrịta, Jean-Roch nke mkpakọrịta “Na sème tous” (Anyi niile na-agha mkpụrụ) bidoro igwu ala anyị ka anyị soro ụmụ anyị kọọ na mmiri osisi cherry nke udo.
Ozugbo ọ batara, Martine Sicard nke ndị otu mba ụwa 2MM mere ngosipụta nke March na njem ya ruo taa, nke eserese sitere n'ọtụtụ kọntinenti gosipụtara. Oge wee ruo Egwu adighi, otu olu na akụrụngwa guzobere ndị bi na mpaghara ahụ, nyere egwu egwu a na-ekpo ọkụ ma na-a countriesụrị ọ fromụ site n'ọtụtụ mba, n'ikpeazụ na-agwa ọha na eze ka ha gbaa egwu ...
Daybọchị ahụ kwụsịrị n'akụkụ nri a na-emekọrịta ọnụ, ọ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma maka mmadụ niile, ọgaranya na mmetụta ya na ahụmịhe ya, na ịkọwa ọtụtụ atụmatụ, ọmarịcha ọdịnala na njikọta ihe karịrị mmadụ 200, nsonaazụ nke ọrụ mara mma na otu n’etiti otu di iche-iche na ndi otu ime-ulo nke Montreuil la Noue, Delpeche-Libération. Ihe nkiri niile siri ike na Brigitte Cano de dere Pressenza , Stéphanie na Arthur nke mkpokọ Ikpeacha Ikpeazụ n'etiti ndị ọzọ.
Arịrịọ maka udo na Trocadero Human rights esplanade
N'echi ya, 23bọchị Sọnde nke iri abụọ na atọ na Paris, ihe ngosi atụ banyere ebumnuche mmadụ nke TrocaderoN'iru Towerlọ Eiffel, ọ kpọkọtara ndị ọrụ mmadụ na akụkụ nke ọha mmadụ ndị sonyere na-eme ntụgharị-uche na gburugburu, maka udo na enweghị mgbagha, mgbe ọ gụchara uri sitere n'ike mmụọ nsọ nke Nathalie S. kwuru. Ọ gụrụ egwu tinyere Nadège, ma Martine S. kwupụtara okwu ole na ole gbasara uru njem nke abụọ a, na-echeta isi okwu ya:
Iwu amachibidoro ngwa agha nuklia… "Anyị kpebisiri ike izere agha maka ọgbọ na-abịa n'ihu. ”.
Ndozigharị nke United Nations, gụnyere na Security Security, otu Council Security gburugburu ebe obibi na kansụl Economic Security. "Unitedtù Mba Ndị Dị n'Otu nke na-agbachitere ụmụ amaala niile nke mbara ala".
Ihe okike nke uwa nile diri uwa. "Iswa bụ ụlọ mmadụ nile ”
-Kpa oke na-enweghị ụdị ọ bụla: mmekọahụ, afọ, agbụrụ, okpukpe, akụnụba, wdg. "Onweghi onye obula kariri ibe ya".
Ọgba aghara dịka ọdịbendị ọhụụ na ime ihe ike dịka usoro nke “Ime ihe ike bu ike nke gha agbanwee uwa".
Ọkụ ndị bịara na ngwụcha gosipụtara nkwado nke ndị nọ ugbu a iji nọgide na-eme ihe ma mụbaa omume ndị a na gburugburu ha ...